Qaraami - Wikipedia
Haku khaldin qaaciga
Qaraami waa nooc ka mid ah heesaha Soomaalida taasi oo leh dhandhan ka duwan noocyada kale ee Suugaanta. Qaraamigu waa heesaha Af Soomaaliga ee la qaaday wixii ka horeeyay 1985kii kuwaasi oo loo tumayo noocyo badan oo qalab muusig ah sida kaban, gitaar, durbaan, biyaano iyo turunbo. Mararka qaar waxaa muusiga qaraamiga loo garaacaa tiro Kooban oo qalabka muusig ah. Si ka duwan heesaha qaaciga, qaraamiga waxaa laga dulqaadayaa masrax halkaasi oo fanaaniintu ku muujiyaan qoobkaciyaar iyo isrux.
kabanku waa u muhiim heesaha qaraamiga
Fanka Soomaalida waxaa in badan ku jira heeso qaraami ah oo la sameeyay wakhtiyadii fanka Soomaalidu hanoqaaday.
2 Sharaxaad Kooban
3 Heesaha Qaraamiga Caanka
Waxa hubaal ah in qofkasta ku khalkhalayo farqiga qaaci iyo qaraami. Qaacigu waa nooc ka mid ah heesaha kuwaasi oo la qaado ayadoo (fanaanku) fadhiyo, loo garaaco sida badan kaban iyo sacab kali ah, laakiin qaarkood lagu daro durmaan ama narso iyo turunbo. Si taasi ka duwan, qaraamiga Waxaa la garaacaya noocyo badan oo qalabka muusig ah, fanaaniintu way taagan yihiin ciyaarayaan (isruxayaan) ama way fadhiyaan.
Heesaha Qaraamiga Caanka
Heesaha hoos ku xusan waa kuwo dhowr jeer oo kala duwan la qaaday. Waxaa laga yaaba inaad aragtey heesta oo leh muusig ama la soo cusboonaysiiyay. Kuwa aan halkan ku soo bandhigay waa nooc qaraami ah.
↑ "heesaha qaraamiga ah"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qaraami&oldid=214898"
Last edited on 9 Agoosto 2021, at 01:26
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 01:26.